Misantatra Pride ny renivohitry ny karnavaly ao Karaiba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Aogositra 2018 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, Español, Italiano, English
“Ny fahatsapana fifaliana tanteraka miraondraona amin'ny araben'ny tanàna nahaterahako sy nahalehibe ahy, ireo arabe izay azo nekena, tsy miova mihitsy isan-taona, ho an'ireo mpifety an'arivony ny mandeha sy mandihindihy mandritra ny fihorakorahana sy fitabatabàn'ny karnavaly.” Saripika: Maria Nunes. Nahazoana alalana.
Avy amin'i Andre Bagoo
Mbola mitsiky ihany aho satria miditra ao amin'ny tantaran'i Trinite sy Tobago ny matso Pride [fireharehana] voalohany nataonay tamin'ny asabotsy 28 jolay 2018 lasa teo. Hatramin'io andro io, niaina tao amin'io zavamisy io aho. Ny fahatsapana fifaliana tanteraka miraondraona amin'ny araben'ny tanàna nahaterahako sy nahalehibe ahy, ireo arabe izay azo nekena, tsy miova mihitsy isan-taona, ho an'ireo mpifety an'arivony ny mandeha sy mandihindihy mandritra ny fihorakorahana sy fitabatabàn'ny karnavaly. Hafa ve izany tamin'io asabotsy io? Ny maha-hafa azy dia nanana antony mihitsy handihindihizana an-dalambe izahay rehetra ireo: nanana fanambaràna lehibe ho avoaka izahay. Maro amin'ireo namako LGBTQ—ny sasany tamin'ireo niverina haingana an-tanindrazana aty Trinite rehefa nifindra monina nitady fiainana tsaratsara kokoa, fiainana voaaron'ny zo fototra miaro azy ireo tsy ho voahilikilika any amin'ny toeram-piasana, amin'ny fahazoana ny servisin'ny governemanta, sady hanekena azy ireo feno ho olombelona mitovy amin'ny hafa rehetra.
Namana maro no niteny ahy tany an-takonana tany fa tsy nieritreritra mihitsy hahita izany fandihindihizana an-dalambe Pride izany indray andro any eto Trinite. Afa-mahatsapa ny fihetseham-pon-dry zareo aho rehefa mampahatsiahy ny taona maro niainana teto amin'ity firenena ity izay tratran'ny fanilkilihana eny amin'ny toerana mahazatra ny maro ny LGBTQ: any an-tsekoly, ao an-trano, any amin'ny fihetezana, any amin'ny trano lehibe fivarotana, any amin'ny asany, any am-piangonana, eny amin'ny toeram-pilalaovana, eny fa na dia ny mandeha eny an'arabe aza. Fotoam-pifaliana madio sy fitiavana ny fandihindihizana an-dalambe tamin'io asabotsy io.
Nanomboka tamin'io fotoana io, voamariko ny fihetsiky ny manampahefana ara-pivavahana. Ny iray manoritsoritra ny dihy an-dalambe ho “mampanahy”. Ny iray hafa mametraka fa tsy tokony ho arovana ny vondrona vitsy an'isa: “Manana zo ny firenena amin'ny ankapobeny hamaritra ny soatoavina tiany hasongadina.” Lazaina ao anatin'ny tava mahitsy [straight face] (misy lalaonteny [anglisy] mihitsy) izany rehetra izany. Saingy mbola misy hafa avy amin'ireto olona masina ireto. Nanontany ny manampahefana [ara-pivavahana] iray raha teraka ho pelaka ireto olona LGBTQ ireto. “Tsy hahitana porofo izany fa teraka araka izany lalana izany ny olona ara-boajanahary.” Nilaza izy fa safidy ny ho gay [pelaka]. Ary noho izany, ny fiantraika ara-boajanahary dia nifidy izay voafehinay tanteraka izahay rehetra nandeha tamin'ny asabotsy.
Lasa lavitra ny iray nilaza fa nanava-tena ny pelaka: “Naka io toerana ara-piarahamonina io ry zareo ary nanava-tena ka manohitra azy ireo ny rehetra, saingy mifanohitra amin'ny fanao ara-piarahamonina ny ataon-dry zareo” Toa manolo-kevitra ity manampahefana fa ny pelaka no mametraka lalàna amin'izay ataon'ny hafa ao am-pandriana, izay nametraka lalàna mankahala pelaka nandritra ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany ao amin'ny boky, nampiditra miharihary fiarovana ao amin'ny lalànan'ny fanoherana fanavakavahana manaisotra azy ireo tsy hahazo ny fiarovan'ny fanjakana. Izay no filazany ny “fanao ara-piarahamonina nôrmaly”.
Manam-baovao hoan'ireto manampahaizana manokana ireto aho—sy ho an'ireo mihevitra fa tonga tampoka avy any amin'ny sambon'habakabaka [mitovy hevitra amin'ny sambondanitra] ny pelaka. Teo foana nandritra ny taonjato maro ny vahoaka LGBTQ. Anontanio ireo olona an'hetsiny nampijaliana sy novonoin'ny Nazis. Anontanio i Shakespeare. Ary efa teto aloha ela noho ny tamin'ny asabotsy ny olona pelaka. Koa ny filazana fa tonga tampoka avy any ivelany izahay dia fihetsika mitady hamadika ny tantara ka noho izany feno fahajambana sy fankahalana.
Hitanareo, ny tena mahakivy ireto mpitarika ara-pivavahana ireto tsy any amin'ny fandresen-dahatra tsotra momba ny haiaina (biôlôjia) (na teraka pelaka ianao na lasa pelaka dia efa pelaka ianao izay). Tsy any amin'ny resaka zo ara-pivavahana (tsy misy mila mitady hanova ny fampianarany manokana any). Ny manahirana ireto mpitarika ireto tsy misy mifandraika amin'ny fampianarana mirona mankany amin'ny karazana fanjakan'olona maromaro tafavory (fa raha tsy izany dia ny mpikambana ao aminy ihany no hijoro hanohitra azy ireo ary handrisika ho amin'ny fanovana ny fampianaram-piangonana tratra aoriana). Tsy any amin'ny fitokisana sasantsasany amin'ny baiboly (izay nampianatra azy ireo ny zavatra rehetra afa-tsy ny fitiavana).
Ny tena mahakivy ny mpitarika ara-pivavahana dia ny mahita fa misy ny pelaka eto amin'ity firenena ity ary tsy menatra izahay.
Mety hanaisotra ny zoko amin'ny fitovian'ny rehetra amin'ny alalan'ny fahaiza-miteny mitongilangilana tadiavin-dry zareo hoforonina ry zareo. Fa fantatrareo ny tsy ho voaaisotry ry zareo na oviana na oviana? Isaorana ny mpikarakara ny TT Pride Arts Festival fa tsy hahaisotra na oviana na oviana ny #Pride2018-ko ry zareo.
Poeta sady mpanao gazety trinidadiana i Andre Bagoo. Nivoaka tamin'ny may 2018 ny angon-tononkalo fahaefatra navoakany mitondra ny lohateny hoe The City of Dreadful Night.